सञ्जीवको ब्लग: 2021
एक अनि शून्य
मेरो ब्लगका प्रिय पाठक,
मलाई विचार र विचारको इतिहासमा रुचि छ । यही रुचिका कारण ममा पाश्चात्य दर्शनशास्त्रका केही मुख्य प्रवृत्तिलाई नेपाली भाषामा सरल रूपमा व्याख्या गर्ने रहर पलाएको थियो -करिब २ वर्षअघि । उक्त रहर यति बेला पुस्तकमा रूपान्तरित भएको छ । मेरो पुस्तक ‘एक अनि शून्य’ नेपालयबाट गत पौष १० गते प्रकाशित भएको छ ।
यस पुस्तकमा प्राचीन ग्रिसको दर्शनशास्त्रबाट मेरो यात्रा शुरु हुन्छ । यस क्रममा इनलाइटनमेन्टका केही दर्शनशास्त्री, भाषाशास्त्रमा विकास भएका केही रोचक दर्शन, संरचनावाद, अस्तित्ववाद, उत्तरआधुनिकतावाद आदि पाश्चात्य बौद्धिक परम्पराका केही महत्त्वपूर्ण प्रवृत्तिको चर्चा गरेको छु । पुस्तकमा सोक्रेटिज, प्लेटो, एरिस्टोटल, इम्यानुएल कान्ट, डेभिड ह्युम, जाँ जाक रुसो, फर्डिनन्ड ड ससुअर, जाँ पाउल सार्त्र, लुडविग विट्गेन्स्टाइन, आर्थर शोपेनहाउअर, फ्रिदरिख निचः, पिअर बोर्दिउ, जाक डेरिडा, रोलान्ड बार्ट, मिशेल फुको आदि दर्शनशास्त्रीका योगदानको चर्चा गरेको छु ।
पुस्तक यहाँले नजिकको पुस्तक पसल वा अनलाइन खरिद गर्न सक्नुहुनेछ, र मलाई आशा छ पुस्तक विभिन्न पुस्तकालयमा निःशुल्क अध्ययनका लागि पनि उपलब्ध हुनेछ । यदि यहाँलाई पायक पर्छ भने त्रिभुवन विश्वविद्यालय मानवशास्त्र केन्द्रीय विभागको पुस्तकालयमा पुस्तक अध्ययनका लागि उपलब्ध छ ।
पुस्तक जब प्रकाशित हुन्छ त्यो पाठकको सम्पत्ति हुन्छ । त्यसमा लेखकको उपस्थिति शून्य हुन्छ र रहनुपर्छ । त्यसैले, पुस्तकको बचाउ गर्ने वा यसको प्रवर्धन गर्नबाट आफूलाई अलग राखिरहेको छु र राख्न चाहन्छु । यद्यपि, पुस्तक प्रकाशनका बारेमा सम्भावित पाठकलाई सूचना दिने मेरो दायित्व पनि हो भन्ने अभिप्रायले यहाँसँग यो सूचना ब्लगमा राख्ने निर्णय गरेको हुँ ।
पुस्तकमा अनेकन कमीकमजोरी र त्रुटी रहेका हुनसक्छन् । यस असुविधाका लागि पाठकहरूसँग क्षमाप्रार्थी छु ।
Posted by Sanjeev at 8:43 PM 1 comment:
राज्यबाट शासित नहुने कला
यो लेख मलाई औधी मन पर्ने अमेरिकी राजनीतिशास्त्री तथा मानवशास्त्री जेम्स स्कट (James C. Scott) को वरिपरि घुम्नेछ । स्कट येल विश्वविद्यालयका प्राध्यापक हुन्, जसले राज्य स्थापनाको इतिहास र यसमा जोडिएका यावत जटिलताका विषयमा प्रशस्त अध्ययन-अनुसन्धान गरेका छन् । म आज उनका विभिन्न महत्त्वपूर्ण पुस्तकमध्ये सन् २००९ मा येल विश्वविद्यालयद्वारा प्रकाशित ‘द आर्ट अफ नट बिइङ गभर्न्ड’ (The Art of Not Being Governed) मा आधारित रहेर राज्यको स्थापना र विकासबारे उनका केही रोचक दृष्टिकोणहरूको चर्चा गर्नेछु ।
Posted by Sanjeev at 9:48 PM No comments:
बसिबियाँलोः एक अ-धार्मिकको आत्मवृत्तान्त
काठमाडौँ र इस्लामाबादमा कतिपय कुरा उस्तै छन्, र कतिपय कुरा फरक । फूलहरूको सौन्दर्य उस्तै छ । पानी परेपछिको माटोको गन्ध उस्तै छ । आकाशमा मनमौजी घुम्ने बादलका टुक्राको चर्तिकला उस्तै छ । हावाका रेत र गति उस्तै छन् । मानिसका आँखा र तिनमा गाडिएका चाहना उस्तै छन् । खानामा चल्ने मरमसला लगभग उस्तै छन् ।
तर, यहाँ प्रशस्त कुरा फरक छन् -जसको चर्चा तल गर्नेछु । मैले देखेको पाकिस्तान (र यहाँको विशिष्टता) मेरा लागि एउटा रोचक प्रश्न हो । यसको व्याख्या कसरी गर्ने ? यस प्रश्नको जवाफ म खोजिरहेको हुन्छु ।
Posted by Sanjeev at 12:16 AM 1 comment:
जनै, मिशेल फुकोः र कान्छी भाउजुको सिन्दुर
भैरव अर्यालको 'टाउको' निबन्धमा एउटा रमाइलो वाक्य छ –‘म पढेको मान्छे, नपढेको कुरा जान्दिनँ ।’ कति गजबको व्यङ्ग पढेलेखेका भनिने मानिसहरूमाथि अर्यालको ! वास्तवमा पढेका मानिसहरू पढेको कुरामात्र जान्दछन्, र तिनै कुरा बताउन खोज्छन् । नपढेका मानिसले त झन् ‘कुरा’ जान्ने कुरै भएन ।
आज हामी पढेका कुरा र नपढेका कुरा दुवै गरौँ । केही किताबका कुरा, केही आफ्नै अनुभवका कुरा । वा भनौं पढेर पनि नपढेका कुरा । बुझेर पनि नबुझिने गरेका कुरा । आजको लेखमा म मार्सेल माउस, ब्रोनिस्वाफ मालिनोभ्स्की र मिशेल फुकोका कुरा गर्नेछु । तर, फिकर नगर्नुहोस् - ती लेखकका किताबमा भएका कुराको फहरिस्त लगाउने मेरो योजना छैन ।
Posted by Sanjeev at 5:01 PM7comments:
जातपातको भैँचालो र देश हुनुको अर्थ
१२ वैशाख २०७२ मा नेपाललाई ठूलो भूकम्पले हल्लायो । हजारौँ घरहरू भत्के, चानचुन १० हजार मानिसको ज्यान गयो । त्यो एउटा ठूलो विपत्ति थियो ।
तर, त्यसको जड जमिनको सतहभन्दा सयौँ किलोमिटरमुनि थियो । गन्जेटिक प्लेट र चिनियाँ प्लेटबीचको घर्षणबाट उत्पन्न ऊर्जा नेपालको नक्साको बीच भागतिर गुजुल्टिएर बसेको रहेछ, अहिले पनि छ । त्यो ऊर्जा एक पटक चलमल गर्दा जमिनको सतह हल्लियो । मानिसले आफू बसेको जमिनमुनिको जटिलताका बारेमा चाल पाए ।
तर, मानिसलाई हल्लाउने भैँचालोले मात्र कहाँ हो र !
Posted by Sanjeev at 11:58 AM No comments:
विकास रोज्ने कि लोकतन्त्र ?!
हिमालखबर पत्रिकामा हालसालै प्रकाशित अर्थशास्त्री विश्व पौडेलसँगको अन्तर्वार्ताले केही लेख्न प्रेरित गर्‍यो । यो ब्लग उहाँसँग गरिएको अन्तर्वार्ता र खासगरी त्यसको अन्तिम अनुच्छेद (तल प्रस्तुत)मा व्यक्त उहाँका विचारमाथिको टप्पणी हो ।
"राजनीतिक अधिकार विलासिता हो। लाेकतन्त्र पनि विलासिता हो। हाम्रो देशमा लाेकतन्त्रका लागि थुप्रै मान्छे मर्‍यौं, दुःख गरेका छौं। तैपनि, संसारमा के पनि देखिन्छ भने विकासका लागि लाेकतन्त्र अपरिहार्य अवधारणा होइन। जस्तो, चिनियाँहरूले लाेकतन्त्रबिना विकास गरे, केही अघि कोरियनहरूले गरे। लाेकतन्त्र भनेको विलासिता हो, त्यो हुँदा कसैले हामीलाई दबाउन सक्दैन। एसियामा राम्रो लाेकतन्त्र भएको ५-६ देश होलान्, तर यहाँबाट पश्चिमतिर गयो भने राम्रो लाेकतन्त्र भएको देश खोज्न इजरायल पुग्नुपर्छ।" -विश्व पौडेल
लोकतन्त्र र विकासबारे पौडेलका विचार वास्तवमा नयाँ होइनन् । नेपालको विकास किन हुन सकेन भन्ने प्रश्नको चर्चामा उहाँले प्रस्तुत गरेका धारणा यसअघि पनि विभिन्न मानिसहरूबाट सुनिएका कुरा नै हुन् । यद्यपि, अन्तर्वार्तामा उहाँका टिप्पणीहरू पढ्दा मलाई अलि बढी अनौठो लाग्नुको कारण के थियो भने उहाँका अहिलेसम्मका लेख-रचनाको मेरो अध्ययनका आधारमा विकास र लोकतन्त्रबारे उहाँले यस्ता टिप्पणी गर्नुहोला भन्ने मेरो अपेक्षा थिएन । त्यसैले, अन्तर्वार्तामा प्रस्तुत उहाँका विचार र त्यसपछि उहाँले प्रस्तुत गर्नुभएका प्रस्टीकरणलाई आधार मानेर केही लेख्ने खसखसले मलाई छोडेन ।
Posted by Sanjeev at 3:38 PM No comments:
साथीहरू, हाम्रो तर्कमा ठूलो झेल छ !
म लेखक होइन । न पेसाले, न सीपले । तर, बेलाबेलामा नलेखी रहन सक्दिनँ । जब आफ्नावरिपरिका कुराहरू भत्किरहेको देख्छु, त्यसबेला लेख्ने बाध्यताले पिरोल्छ । आफ्नो समाजको गति र चरित्रमा आएको तीव्र परिवर्तनमा ‘होस् है, के टाउको दुखाउनु’ भनेर चुपचाप बस्ने धैर्यता ममा रहेनछ । यो लेख त्यही सिलसिलाको एक अर्को भाग हो ।
मेरो लेखनयात्रासँग एउटा दु:खद अनुभूति जोडिएको छ । म विगत चानचुन १०-१२ वर्षदेखि जुनजुन मुद्दामा लेखिरहेको छु, ती मुद्दा समयसँगै झन्-झन् जटिल र पेचिला बनिरहेका छन् । मेरो लेखाइको एक मात्र उद्देश्य लोकतन्त्र र सामाजिक न्यायसँग जोडिएका आधारभूत मूल्यमान्यताको रक्षा होस् भन्ने हो । यस्ता मूल्यमान्यताले आज झेल्नुपरेको संकटले मेरो लेखनयात्राको समग्र अनुभूतिलाई दु:खद बनाएको छ ।
Posted by Sanjeev at 11:50 AM No comments: